Afak’omaly alina vao vita ny fanolorana ireo olona 12 voarohirohy voatana teny amin’ny polisy, ka ny enina tamin’ireo dia naiditra am-ponja eny Antanimora avokoa. Omaly kosa ny lehilahy iray izay ahiana ho tena ireo jiolahy nandray anjara tamin’ny fanafihana, ka voasambotry ny zandary, no natolotra ny Fitsarana ary efa nalefa eny Tsiafahy.
« Ny zoma teo no nisamborana an’i Lalaina. Ahiana ho isan’ireo jiolahy nanao ny fanafihana mihitsy izy. Mbola tratra tany aminy ny vola 5 tapitrisa ariary isan’ireo vola avy norobainy. Ny 19 jolay izy ireo no efa nanomana iny fanafihana ny mpaka volan’ny kaongresy iny », hoy ny avy amin’ny zandary.
Isan’ireo voatana eny Antanimora ny tompon’ilay fiara Galloper, izay nampiasain’ireo mpanakan-dalana sy nangalatra ireo vola. Voatana koa ny mpanamarin-kaonty roa, ny mpamily ny fiaran’ny CT, ny mpanao irakiraka sy tompon’andraikitra iray izay samy mpiasa ao amin’ny Kaongresin’ny tetezamita avokoa.
Faralala / B.A